Chii chinonzi Trojan Horse? | Noti Mahosi
Carlos Garrido | | Mabhiza
Kutaura nezvemabhiza kutaura nezvenharaunda yakakura zvechokwadi. Tinogona kutaura pamusoro pemhando dzakasiyana dzinoverengerwa mukati memhuka iyi, makwikwi emitambo mairi mune protagonist, dressage yayo, nezvimwe. Zvakanyanya kudaro, kuti mabhiza avewo mavara kubva kune sainzi ngano uye zvimwe zvinhu. Muenzaniso wakajeka weiyi ndiyo inonyanya kuzivikanwa se Troy Bhiza.
Muchikamu chino isu tichaedza kutsvaga zvakawanda nezve iri rakasarudzika bhiza, zvarinoreva, mavambo, nezvimwe.
1 Chii chinonzi Trojan Horse?
2 Nhoroondo yeTrojan Horse
3 Mumiririri wehunyanzvi weiyo Trojan Horse
4 Mafirimu nezve iyo Trojan Horse
5 Iyo imwe Trojan Horse
Chii chinonzi Trojan Horse?
Trojan Horse inoreva chiumbwa chikuru, chakagadzirwa nematanda, uye icho Yakashandiswa nevarwi vechiGreek mune yakakurumbira Trojan War (yakaitika muBronze Age muna 1.300 BC). Zvinyorwa zvekare kwazvo zvinoreva Trojan Horse ndezvi Homer's Odyssey y Virgil's Kubatsirwa.
Muhondo yakati, maTrojans akagamuchira Trojan Horse sechipo yekukunda kwake muhondo yehondo. Chavaisaziva ndechekuti mukati maive nemhomho huru yemasoja evavengi, akarwisa nekushamisika manheru, achiuraya vadziviriri veguta re Troy uye, nekudaro, zvakakonzera kudonha kwehumambo.
Chaizvoizvo, hazvisati zvazivikanwa kana kuvapo kweTrojan Horse kwaive kwechokwadi. Vazhinji vanosimbisa kuti haina kumbova inobatika, asi, kune rimwe divi, kune vamwe vanozivisa kuti zvinogona kudaro mhando yemuchina wemauto wakabhabhatidzwa une zita iro.
Chokwadi ndechekuti rave iro sosi yekurudziro kune akawanda mabhuku uye ehunyanzvi zvidimbu.
Nhoroondo yeTrojan Horse
Mukuedza kwake kusingagumi kupinda muguta reTroy, Odysseus akarayira kuvakwa kwehombe hombe yemuti kuti inogona kugara imwe nhamba yenhengo dzeuto reGreek.
Epeo akapihwa basa rekuvaka rakadai basa, uye makumi matatu nemapfumbamwe varwi naOdysseus pachake vakaunzwa. Varwi vese vakasara vakasiya bhiza nevamwe vavo pamberi pemasuwo eguta reTroy nechinangwa chakajeka chekuti maTrojans vatende kuti ichi chipo chaireva kuti muvengi abviswa. Uye zano rakafamba zvakanaka.
Husiku ihwohwo, maTrojans anodada akaunza bhiza hombe muguta ravo, vasingazive kuti kana munhu wese akarara, varwi vechiGreek vaizobuda mukati meimba ndokutanga kuvarwisa.
Mumiririri wehunyanzvi weiyo Trojan Horse
Munhoroondo yese, mazhinji anga ari iwo tsika nemagariro akaedza kumiririra, neimwe nzira kana Trojan Horse.
Zvichida chimwe chekare chivezwa chinoonekwa mune izvo zvinonzi Mykonos girazi kudanana kubva muzana ramakore rechinomwe BC uye nefibhurasi fibula iri yeiyo Nguva yeArchaic. Kune izvi zvinowedzerwa zvidimbu zveceramic kubva Atene naTinos. Uye yaive mu Yakajeka Greece uko iro bhiza rinoyevedza rakawana kukosha uye kukosha, sezvo midziyo yakawanda senge magirazi, mahwendefa, zvishongo, pendi yakashongedzwa nemufananidzo wayo ... Pamusoro pezvese izvi, pane chifananidzo chendarira, basa ra Stongilion, yakaiswa munzvimbo tsvene ye Artemis Brauronia yeacropolis, iyo kuchine zvimwe zvasara.
Uye zvakare, uye sekutaura kwatamboita, iri bhiza nebasa raro munhoroondo yeTrojan War yakashanda semushandi wezvekupedzisira mabasa, kujekesa saga yakasainwa naJuan José Benítez.
Mune mabhuku gumi, Benítez, munyori wechiSpanish, inotaurira maitirwo akaitwa basa rekuti "Trojan Horse", iro raisanganisira kufamba kuenda kune zvakapfuura kunoona zviitiko zvakanangana muhupenyu hwaJesu weNazareta. kuzvitsanangura. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti aya mabhuku akakonzera kupokana kukuru, nekuti, kune imwe nhanho, vaipesana nedzidziso dzechinyakare dzechitendero.
Mafirimu nezve iyo Trojan Horse
Zviripachena, uye sezvazvinowanzoitika muzviitiko zvakawanda, nyika ye cinema yanga isiri mutorwa kunyaya yeTrojan Horse uye yakwanisa kuunza kune iyo huru skrini.
Iyo bhaisikopo "Troy", inotungamirwa naWolfgang Petersen uye nyeredzi Orlando Bloom naBrad Pitt pakati pevamwe, inotaurira zvakaitika muhondo yeTroy, zvichibva pane zvakagadzwa munhetembo ine mukurumbira ya Iyo Iliad. Uye, hongu, mariri bhiza guru remuti rakagadzirwa nemaGreek rinotora nzvimbo inozivikanwa.
Iyo imwe Trojan Horse
Trojan bhiza zvakare iri software kana komputa chirongwa chinoshanda mukuremekedza tateguru vayo. Sezvinei, hutachiona uhwu hunopinda mukati mekombuta uye hunoparadza chaizvo mamwe mapurogiramu akaiswa uye hunopa mukana wekuwana ruzivo rwakasiyana uye zvemukati zvakagamuchirwa mukati mechirongwa, hapana kana chinhu!
Kuti tizvizive, tinogona kutarisisa zviratidzo zvakasiyana zvinoita kuti tione maitiro asina kujairika pakombuta yedu, se mameseji akaisirwa mumawindows asina kujairika, kunonoka muhurongwa hwekushandisa, mafaera anobviswa nekugadziriswa, nezvimwe.
Kana tichida kudzivirira kurwiswa nehutachiona uhwu, tinofanira kuva nechokwadi chekuti une antivirus yakanaka uye usaise zvirongwa kubva kunzvimbo dzisingazivikanwe.
Ndinovimba ndakwanisa kukubatsira iwe kuti udzidze zvakawanda nezvazvo Troy Bhiza uye vawana zvimwe zvinhu izvo, pamwe, vanogona kunge vasina kuziva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti mabhiza » Mabhiza » Troy Bhiza